Chii chinonzi hupfumi hwehupfumi? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi hupfumi hwehupfumi?
Jose recio | | dambudziko, General hupfumi
Chimwe chezviitiko icho vatyairi vanotya zvakanyanya ndiyo inonzi hupfumi hwehupfumi. Hazvishamisi kuti, iyi nzira inotungamira kune yakakosha anonyika mumisika kusiyanisa mari. Ivo havawanzoitika, asi pavanobuda iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuve kure chero chinzvimbo mubhegi. Kutema mumitengo ye zvikamu ivo vakanyanya kwazvo uye vanogona kudonhera kumazinga mashoma. Kusvika padanho rekuti ivo vanogona kutorwa mukana neavazhinji vanofungidzira mari.
Nekudaro, havazi vese vadiki nepakati varimi vanoziva zvarinoreva zvechokwadi. Zvakanaka, kuti uve nazvo zvakajeka kubva ikozvino zvichienda mberi, iwe unofanirwa kuziva kuti iro rebhuruu rezvehupfumi, iro zvakare rinonzi zvemari, iri activation stock exchange izvo zvinoitika kana paine kukanganisa kwakakomba pamisika yemari. Chero nzira, uye izvi zvakanyanyisa, mabhuru anoonekwa kunyangwe pasina chokwadi uye pasina fungidziro. Kunyangwe mune yekupedzisira kesi ivo vari akaomesesa kuona neakasiyana emari vamiririri.
Chimwe chinhu chaunofanira kuziva izvozvi ndechekuti chiitiko chehupfumi ichi chiri kuwedzera kuita nemaitiro e kuwirirana kwemutengo. Chinhu chinonzwisiswa zvirinani senge mune chaicho chiitiko cheayo anonzi real estate bubble, yakanyanyisa kuSpain mumakore achangopfuura. Kune rimwe divi, icho chiratidzo chinobuda semhedzisiro yenguva yekubwinya kana hupfumi hwehupfumi. Mushure menguva yekuwedzera kwehupfumi izvo zvinowanzotungamira mamiriro atiri kutaura nezvazvo muchinyorwa chino.
1 Bubble: inogona kupera mukutsemuka
2 Nzira yekuona sei kubuda?
3 Migumisiro yekufamba uku
4 Mutemo wekugovera uye wekuda
5 Maitiro emusika
6 Zvimwe zvikonzero zvekuonekwa kwayo
Bubble: inogona kupera mukutsemuka
Chinhu chinonakidza kwazvo pamusoro pebhorosi rehupfumi nderekuti rinogona kupera mukudonha kwemari kunogona kuparadza huwandu hwakawanda hwepfuma munyika. Sezvazvakaitika mumakore achangopfuura ne Kushungurudzika Kukuru yema1930 uye bubble yedzimba muJapan muma1990. Iyi ndiyo mienzaniso inotsanangura chaizvo kufamba kwemari uku kunonetsa vatengesi zvakanyanya. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo vanogona kurasikirwa nemari yakawanda mukuita kwavo pamusika wemusika. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakakosha poindi yemisika yemari.
Nezvehunhu hwavo, vane hunhu hwakasiyana uye hunogoneka muchikamu chinotevera icho isu chatinonongedzera iwe: zvine musoro, zvemukati uye inotodaidza seinotapukira. Kunyangwe iyo yekupedzisira iine yakawanda yechinhu chepfungwa pamusoro peimwe macroeconomic nzira. Iyo inozivikanwa nekuti ichi chokwadi chinotungamirwa nedanho rakakomba. Iko vatengi vanotanga kushomeka, uye vamwe vatengesi vanotanga kutengesa zvinzvimbo zvavo mumisika yemari. Kupedzisira mukuvhunduka kunotyisa kana kwetemu iwe unogona kuvaziva zviri nani sekuparara, kunyangwe uine ndangariro dzakaipa kune vanoita mari.
Nzira yekuona sei kubuda?
Kana panonzi utsi hweupfumi hwunogadzirwa pane nhevedzano yezviratidzo zvinoratidza kuti takatarisana neiyi nyika isina kusimba muhupfumi hwenyika kana pasi rose. Izvo zviri nyore kucherechedzwa uye pamusoro pazvo zvese zvinoenderana nezviratidzo zvinotevera kuti tinokufumura pazasi kuitira kuti ugone kujekesa zvishoma iri rakakosha rezvehupfumi.
General kudonha yemisika yekutengesa, ine nhanho dzinogona kuve dzakanyanya uye dzinoperekedzwa nedanho repamusoro rekubvumirana. Mumavhiki mashoma, kukosha kwezvikamu kwakadzikira zvakanyanya.
El kunwa kunoderera kunyanya kusvika pakuti inogona kuisa hupfumi hwenyika kana hwenzvimbo panjodzi. Vashandisi vanoshandisa mari shoma kutenga zvigadzirwa zvebasa, kutora mashoma emamogeji uye kushandisa mari shoma pane zvavagara vachitenga. Nekusimudzira kwekuchengetedza pamusoro pezvimwe zvinhu.
Kukura kwehupfumi kunowira kumatanho anogona kutariswa seane njodzi zvakanyanya. Hazvishamisi kuti zvakajairika kuti ivo varimo kukura kwakashata kwema trimesters akati wandei kana kunyange makore senge mune nyika dziri kusimukira. Icho chinhu chinonyanya kukuvadza mumabhizimusi emari kana ehupfumi.
El kushaya mabasa inokura panoitika mamiriro ehupfumi aya, kune dzimwe nyika ane zvikamu zvinogona kuomera hurumende kufunga. Kunyanya uko kune matambudziko anoonekwa seanogadzirwa, semuenzaniso kuSpain. Nematanho ari pamusoro pe20%, sezvakaitika mumatambudziko ekupedzisira ezvehupfumi, muna 2007 na2008.
Iko kusagadzikana mune misika yemari Iyo ndeimwe yemamwe madhinominesheni ezviitiko zvine matambudziko muhupfumi. Nemisiyano pakati pemutengo wayo wepamusoro nepashoma muchikamu chimwe chete chekutengesera icho chingapfuura nhanho dze10% kana kunyangwe zvine simba mukufamba kunonyanya kutaurwa kwemidziyo yemari iyi.
Migumisiro yekufamba uku
Hapana mubvunzo kuti bubble yeupfumi inogona kuve nemhedzisiro yakaipa munharaunda yese. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti kumuka zvisina kujairika uye kwenguva refu Mutengo wemamwe masheya kana zvivakwa unokonzeresa kukakavara kwekufungidzira uko kunoguma nekuparadza hupfumi. Iyo yehupfumi bubble haina yakatarwa nguva. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinogona kutora kubva kumwedzi mishoma (kunyangwe ichi chiitiko chisingawanzoitika) kusvika kumakore mazhinji uye nekuparadza hupfumi hwenyika dzese kana angangoita mamwe marudzi epasi.
Kune rimwe divi, zvakajairika kuti kana isu tiri kutaura nezve ino maitiro ehupfumi mafambiro zvinoita sekunge tiri kutaura zvakananga kune dambudziko kana real estate bubble. Asi kurambidzwa ndekwekuti ivo havafanirwe kunge vachienderana, kure nazvo. Kunyangwe ivo vachienderana mune kwayakatanga sezvo iine zvakanyatsotsanangurwa zvinowoneka izvo zvinogona kuongororwa nevanoongorora zvemari vane mukurumbira mukurusa mumisika. Hazvishamise kuti mabviro emabhuru emari anowanzo fungidzira. Kufungidzira kunosanganisira kutora chinhu kana chigadzirwa nechinangwa chikuru chekuzvitengesa mushure memutengo wakakwirira.
Mutemo wekugovera uye wekuda
Chero zvazvingaitika, pane akateedzana ezviratidzo ayo anogona kukupa iwe chishandiso mukududzira kwayo. Sezvazviri mune chaiyo nyaya yekuti mabhuru emari inyaya yehupfumi iyo ine kusimba kwakasimba pakati pekupa uye kudiwa. Kana izvi zvikaitika, iri kugadzira yakakosha mhedzisiro pahupfumi hwenyika kana pasirese pasirese, sezviri kuitika mumakore achangopfuura nematambudziko ehupfumi. Izvo hazvikanganisa imwe nyika, asi asi nzvimbo dzakakura kwazvo dzehupfumi, semuenzaniso inogona kunge iri munzvimbo ye euro.
Chimwe chikamu chinofanirwa kutariswa kubva zvino zvichienda pachokwadi chekuti, kune imwe nhanho, zvinokwanisika kufanoona mafambiro akanyatso kutaurwa mune hupfumi hwenyika. Nekuti mukuita, iko kukura kwakasimba mumutengo, uko kungaite sekutora chaiko kwekutora kwehungwanda hwemari, hazvingafananidzi fanika nebhuru. Kubva pane iyi nzira, inosanganisira akateedzana ematambudziko e kunyatsoongorora yeiko bhoo rehunhu uhwu. Kunze kwezviratidzo zvayo zvakakosha uye izvo zvinogona kukanganiswa nekumwe kufamba kwemari kwesimba rinokwevera asi izvo zvisingaite bhuru rezvemari kana rehupfumi.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuziva kubva zvino zvichienda mberi kuti misika yemasheya inoratidza maitiro anoenderana nemabhuru emari. Sekureva kwaDow, muvambi weiyo New York Dow-Jones index, musika wemasheya unoratidza matatu maitiro: yekutanga maitiro, yechipiri maitiro, uye tertiary maitiro. Icho chiri mune yekupedzisira uko iyo bubble yatiri kutaura nezvayo inogona kuitika. Hazvishamisi kuti, inozivikanwa pamusoro pezvose nekuti mu tertiary maitiro inowirirana nekuchinja-chinja kwemitengo inogadzirwa panguva imwecheteyo pamusika wemusika.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa mune izvi chokwadi chekuti musika wezvemari uri kuwedzererwa uye kutengesa kunoiswa nehunyanzvi hwekumanikidza chimwe chezviratidzo zvinoshandiswa nemhando iyi yemabhuru kana kuunganidzwa. Iko kune kudonha kwakapinza uye kuvhunduka pakati pevashambadziri, kusvika padanho rekuti vachatengesa zvinzvimbo zvavo mumisika yemakero kunyangwe pamutengo wekurasikirwa nemari yakawanda pazvirimwa zvavo.
Zvimwe zvikonzero zvekuonekwa kwayo
Nekudaro, kune zvimwe zvinyorwa zvekuongorora zvinotsanangura ichi chakakosha chokwadi kana chiitiko chehupfumi. Semuenzaniso, iri ongororo isina musoro, zvichibva chete pamihoro yakawanikwa munguva yadarika yeaseti. Pasina chero nguva uchifunga nezve chikamu chechisimba ongororo yemari midziyo. Uye izvo zvinogona kutungamira kune zvisingadiwe mhedzisiro kune chikamu chevadiki nepakati varimi. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Iko kunogoneka zvakare kuti mumisika yakadarikidza, uye nemweya wekutarisira kwakakura, zvinogona kutungamira mukufunga kwevashambadzi kuti mamiriro aya haazoshanduke kwenguva yakareba. Kusvika padanho rekugadzira zviitiko zvisingatombofadze zviito zvevashambadzi vadiki nepakati. Iko kune vane zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi hupfumi hwehupfumi?
Iyo goho curve inotarisira inotevera inotevera hupfumi
Vashandisi vanosiya mari dzekudyidzana: kuregererwa kwakawanda